Ahoana ny fampifandraisana ny iPhone amin'ny fahitalavitra na tsy misy tariby: ny safidy rehetra! | Vaovao IPhone
Ignatius Room | | appletv, iPhone
Azo antoka fa maro aminareo no namela ny solosaina findaninao taloha teo ambonin'ny talantalana na anaty vatasarihana ary amin'izao fotoana izao dia tsy mikasa ny hanova azy ianao satria avy amin'ny iPhone na iPad azontsika atao ny manao ny zava-drehetra, azontsika atao koa ny mampiseho ny atin'ny fitaovantsika rehetra. eo amin'ny efijery lehibe ao amin'ny efitrano fandraisam-bahininay. Apple dia manolotra fomba hafa ahafahana manao mampifandray iPhone na iPad amin'ny TV. Raha te hampifandray azy amin'ny solosaintsika isika, ny orinasa ihany koa dia manolotra antsika safidy isan-karazany, na misy na tsy misy tariby. Fa manana safidy hafa koa isika nefa tsy mandalo ny tanan'ny Apple.
Ny sasany amin'ireo rindranasa misy ao amin'ny App Store izay mamela antsika hankafy ny atiny mivantana, manana ny fiasan'ny AirPlay ataon'ny mpamorona, asa iray izay mamela antsika hampiseho ny atin'ny fitaovantsika amin'ny efijery ao amin'ny efitrano fandraisam-bahininay amin'ny alàlan'ny fahitalavitra Apple. Soa ihany, ny fahafaha-mampiseho ny atin'ny iPhone na iPad amin'ny alàlan'ny tariby dia tsy azo foanana, ka io no fomba tokana ahafahana mankafy ny atiny amin'ireo rindranasa ireo ao amin'ny efitrano fandraisam-bahininay nefa tsy mila manao izany amin'ny efijery misy antsika. iPhone na iPad.
Betsaka ireo mpampiasa nanomboka nanilika ny solosaina findainy indrindra noho ny tsy fampiasana azy io satria miaraka amin'ny iPhone na iPad dia azonao atao ny manao ireo asany ireo, mamonjy lavitra hatrany. Rehefa nivoatra ny finday avo lenta, tsy ny iPhone ihany, ny varotra solosaina dia nianjera tamin'ny ambaratonga manan-tantara ary tsy niova ny fironana. Tamin'ny 2008, saika ny 90% -n'ireo fitaovana mifandray amin'ny Internet mampiasa ny rafitra fikirakiran'ny Windows, fa mandritra ny volana vitsivitsy, Android no nanjary rafitra fiasa be mpampiasa indrindra hifandray amin'ny Internet, izay taratry ny fiovan'ny fironana niharan'ny tsena tato anatin'ny taona vitsivitsy.
1 Mampifandray iPhone amin'ny fahitalavitra tsy misy tariby
1.2 Mac na PC mifandray amin'ny fahitalavitra
2 Ampifandraiso amin'ny telefaona ny iPhone amin'ny tele
2.1 Mac mifandray amin'ny fahitalavitra
2.2 Tselatra mankany amin'ny adaptatera mpampifandray VGA
2.3 Tselatra ofisialy mankany amin'ny Cable Cable
Mampifandray iPhone amin'ny fahitalavitra tsy misy tariby
Ny fomba tsara indrindra hizarana ny atin'ny iPhone, iPod touch na iPad antsika dia amin'ny alàlan'ny protokol AirPlay, noforonin'i Apple ho avelao ny fifanakalozana atiny video, mozika na sary amin'ny fahitalavitra na rafi-mozika. Ny AirPlay dia mitaky fa ny mpandefa sy ny mpandray dia mifandray amin'ny tambajotra WiFi iray ihany ary araka ny anarany, ny fifandraisana dia tsy misy tariby.
Ny Apple TV no fitaovana quintessential ahafahana mampiseho ny atin'ny iPhone, iPad na iPod touch amin'ny efijery TV an'ny tranontsika. Nandritra ny taona maro dia nitatra ny fiasa natolotry ny Apple TV, indrindra taorian'ny fahatongavan'ny Apple TV andiany faha-4, fitaovana iray misy fivarotana fampiharana azy irery ahafahantsika mankafy serivisy mozika amin'ny streaming toa an'i Netflix, HBO, Hulu. .. fa mamela antsika hankafy ny lalao iOS amin'ny efijery lehibe ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinintsika koa izany tsy mila mizara na manome fitaratra amin'ny efijery, raha toa ka efa namboarin'izy ireo ny interface ho an'ity fitaovana ity.
Raha te hampiseho ny atin'ny fitaovanao iOS amin'ny fahitalavitra fotsiny ianao, miaraka amin'ny Apple TV andiany faha-3 dia mihoatra noho ny ampy. Ny Apple TV taranaka faha-3 dia nijanona tsy nivarotra fotoana fohy taorian'ny fanombohana ny maodelin'ny taranaka faha-4, herintaona mahery kely lasa izay, saingy mbola afaka mahita azy amin'ny 60 euro eo amin'ny Internet isika anio. Na afaka misafidy ihany koa ny handeha any amin'ny tsena faharoa, izay ahitantsika azy mora vidy kokoa.
ankehitriny Apple dia manome maodely roa an'ny Apple TV, 32 sy 64 GB. Ny Apple TV taranaka faha-4 dia vidiny 179 euro, raha ny maodely 64 GB kosa misy 229 euro amin'ny Apple Online Store. Ity fitaovana ity tsy misy amin'ny Amazon Noho ny zava-misy fa ny serivisy fandefasana horonantsary an'i Amazon dia tsy napetraka ho azy ao amin'ilay fitaovana, antony lehibe kokoa noho ny antony tokony handavan'ilay lehiben'ny mpanatanteraka ao Amazon ny tsy hivarotra an'ity fitaovana ity.
Mac na PC mifandray amin'ny fahitalavitra
Raha manana Mac Mini ho ivon-haino aman-jery ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinintsika mifandray amin'ny fahitalavitra isika, dia afaka mampiasa ny asan'ny AirPlay ihany koa. Mba hanombohan'ny Mac antsika hanolotra an'ity serivisy ity dia tokony hampiasa fampiharana toa ny Airserver, jiro 2, LonelyScreen o 5KPlayer. Ny fampiharana roa voalohany dia vidin'ny 13,99 sy 14,99 euro, raha Maimaimpoana tanteraka ny 5KPlayer sy LonelyScreen. Ankoatr'izay, 5K Player dia mpilalao horonantsary feno mifanaraka amin'ny endrika rehetra.
Amin'izany fomba izany, amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo rindranasa napetraka ao amin'ny Mac misy antsika mifandray amin'ny fahitalavitra ireo dia afaka mizara ny atin'ny iPhone, iPad ary iPod touch mivantana eo amin'ny efijery ny efitrano fandraisam-bahinintsika isika. tsy mila mividy adaptatera, fitaovana na tariby. AirServer, Reflector 2, LonelyScreen, ary 5KPlayer dia azo alaina amin'ny tontolo iainana Windows sy macOS.
Ampifandraiso amin'ny telefaona ny iPhone amin'ny tele
Mac mifandray amin'ny fahitalavitra
Raha tsy te-hametraka rindranasa amin'ny Mac izahay hampiatoana ny asan'ny AirPlay afaka manao ilay rindranasa QuickTime teratany izahay. Nandritra ny roa taona, Apple dia namela anay haneho ny atin'ny fitaovantsika amin'ny alàlan'ny QuickTime, na dia mamela anay hanana firaketana an-tsoratra izay rehetra aseho eo amin'ny efijery aza. Mba hanaovana izany dia mila mampifandray ny iPhone, iPad na iPod touch amin'ny Mac amin'ny alàlan'ny tariby Lightning fotsiny isika.
Tselatra mankany amin'ny adaptatera mpampifandray VGA
Raha manohy miady ny fahitalaviantsika taloha ary tsy mikasa ny hanova azy izahay. Na na dia tsy manana fifandraisana maimaim-poana amin'ity karazana ity aza ny fahitalaviantsika amin'ny fifandraisana HDMI dia azontsika atao ny mampiasa ilay Tselatra mankany amin'ny adaptatera VGA, adaptatera iray izay tsy mampiseho ny sarin'ny fitaovantsika fotsiny eo amin'ny efijery fahitalavitra na monitor (raha azo ampiharina), satria io karazana fifandraisana io dia tsy afaka mamindra feo, toy ny hoe vitantsika amin'ny Lightning mankany HDMI izany.
Raha manana stereo eo akaiky isika, afaka mampifandray ny fifandraisana an-telefaona an'ny fitaovantsika izahay mba tsy tokony hankafizanao ny atiny amin'ny alàlan'ny audio an'ny fitaovantsika. Na, raha manana mpandahateny bluetooth isika dia afaka mandefa ny signal audio amin'ity fitaovana ity. Na koa, afaka mampifandray headset bluetooth amin'ny fitaovana hankafizantsika ny audio isika nefa tsy manelingelina olona. Araka ny hitanao dia misy vahaolana ho an'ny zavatra rehetra.
Ny mpampitohy amin'ny Lightning to VGA Misy vidiny ao amin'ny Apple Store 59 euro. Indraindray io mpampitohy ofisialy io ihany, nosoniavin'i Apple, dia azo amidy amin'ny Amazon.
APPLE MD825ZM / A - Adapter hampifandray ny iPhone amin'ny TV
Tselatra ofisialy mankany amin'ny Cable Cable
Fantatra amin'ny fomba ofisialy amin'ny hoe Lightning Connector mankany Digital AV Adapter. Ity tariby ity izay misy vidiny ao amin'ny Apple Store 59 euro, mamela antsika milalao ny atin'ny iPhone, iPad ary iPod touch-tsika miaraka amin'ny mpampitohy Lightning miaraka amin'ny vahaolana hatramin'ny 1080p amin'ny televiziona, projector na seho mifanaraka amin'ny HDMI, famaritana mihoatra ny ampy ho Fahitalavitra 32 santimetatra manomboka izao, na dia mety ho somary fohy aza izany raha manana fahitalavitra 50-inch ianao na mihoatra. Amin'izany fomba izany dia hahafahantsika mankafy lalao baolina kitra, andian-tsarimihetsika na sarimihetsika avy amin'ny fitaovantsika iOS amin'ny fahitalavitra, projecteur na efijery amin'ny fomba lehibe.
Ity adapter ity dia manolotra fidirana HDMI sy mpampitohy Lightning hahafahantsika mameno ny fitaovana mandritra ny fandaniana atiny amin'ny efijery lehibe. Afaka mampifandray azy tsy maintsy mividy tariby HDMI misaraka isikasatria tsy mampiditra an'io adapter io. Raha tsy maika hividy an'ity adapter ity isika, dia afaka mitsidika an'i Amazon matetika, izay amidy io adapter io indraindray.
Adapter HDMI ho an'ny ...
Mazava ho raha tsy te-handany ny vola lany amin'izany adapter izany izahay, Afaka mampiasa adaptatera tsy ofisialy misy amin'ny eBay sy Amazon izahay, saingy rehefa mandeha ny fotoana dia mijanona ny asany satria hitan'ny Apple fa tsy ofisialy izany ary avelantsika hampiasa azy io. Ary koa, ny kalitaon'ny fananganana sy ny fitaovana dia mamela zavatra maro irina.
Fantatrao ve misy fomba hafa azo atao mampifandray iPhone amin'ny fahitalavitra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Ahoana no mampifandray ny iPhone amin'ny fahitalavitra
Safidy tsara koa ny Ezcast, xiaomi tv, ary chromecast.
Tsy misy amin'ireo fitaovana telo ireo mamela antsika hampiseho ny atiny rehetra amin'ny iPhone amin'ny fahitalavitra, tsy mifanaraka izy ireo, izany no tsy anisany ilay lahatsoratra.
bmdarwinergio dia hoy izy:
Mamela anao hanao zavatra mitovy amin'ny Screen Mirroring ve ny Apple TV nefa vonoina ny efijery iPhone?
Mieritreritra ny hividy iray aho, indrindra satria manana Vodafone TV aho, ary ny illuminaos dia tsy mamorona rindranasa SmartTV, ary tsy hitako izay hatao, satria miaraka amin'ny tariby misy jiro-HDMI voafaritra fa mila manana ny iPhone miaraka amin'ny efijery.
Mamaly an'i bmdarwinergio
Efa, ny olana dia miaraka amin'io tariby io dia tokony ho eo ny efijery iPhone.
Noho izany tsy haiko raha AppleTV manamboatra an'io.
Nathanael Gonzalez dia hoy izy:
Ny Iphone 6-ko dia tsy mifandray amin'ny fahitalavitra amin'ny alàlan'ny tariby HDMI taloha, raha nanao izany aho dia nesoriko izy io ary raha nifandray indray aho avy eo dia nifandray izao ary tsy fantatro izay nanjo azy, inona no azoko atao, azonao atao ve izany ampio aho
Valiny tamin'i Natanael Gonzalez
Fanamboarana programa ho an'ny iPad Pro Smart Keyboard
Tonga ny andro: miala sasatra ary avelao ny iPhone hanaovanao ny kafe